Ny OnePlus Band dia nambara tamin'ny sensor SpO2 sy fahaleovan-tena hatramin'ny 2 herinandro | Androidsis
Nanapa-kevitra ny OnePlus fa hanambara ny smartband voalohany rehefa avy namoaka ny sary ofisialy voalohany ny vokatra izay ho tonga any India amin'ny voalohany. OnePlus Band no azo anaovana voalohany ny mpanamboatra Miaraka amina endrika efa mitovy amin'ny an'ny tarika maro hafa misy eny an-tsena.
OnePlus Band dia manome fahaleovan-tena manan-danja, Amin'izany dia manampy tombontsoa vitsivitsy izy izay mahatonga azy io ho safidy tsara raha mitady zavatra homena ianao amin'ny fotoana rehetra. Rehefa avy nametraka ny tenany ho iray amin'ireo orinasam-pamokarana telefaona izy dia natolotry ny sehatra iray izay hanao fanafihana mihoatra ny iray.
1 OnePlus Band, tarika natao haharitra
2 Maody fanatanjahan-tena hatramin'ny 13 sy vaovao hafa
OnePlus Band, tarika natao haharitra
As a highlight the Ny OnePlus Band dia mampanantena amin'ny 100 mAh fizakantenany 14 andro amin'ny fampiasana tsy misy enta-mavesatra teo aloha, na inona no mitovy, roa herinandro amin'ny fampiasana mahazatra. Ny enta-mavesatra amin'ity tranga ity dia ho entina amin'ny alàlan'ny sehatry, ka ilaina ny mamoaka azy ary mampifandray azy amin'ny mpampifandray izay tonga ao anaty boaty.
OnePlus Band dia mampiditra efijery AMOLED miloko 1,1 hakiho Miaraka amin'ny vahaolana 126 x 294 teboka, ny tsara dia manome fijery tsara izy noho io haitao io. Ny famirapiratana dia azo ovaina, noho izany miankina aminao ny manao ny tsara indrindra amin'ny toe-javatra tsirairay, indrindra amin'ny masoandro. Izy io dia manana fomba fandefasana dial 37 hafa.
Ampiana sensor ny tahan'ny fo, sensor SpO2, accelerometer ary gyroscope, ny fanoherana dia IP68 ary ao anaty rano dia mitazona ny mahazatra ao amin'ireo tarika ireo izy, eo amin'ny 5 ATM eo ho eo. Ny fifandraisana dia mihazakazaka feno Bluetooth 5.0 ho an'ny fifandraisana amin'ny finday, ampiasao fotsiny ilay rindranasa izay ho sintonina raha vao esorinao hiala ao anaty boaty.
Maody fanatanjahan-tena hatramin'ny 13 sy vaovao hafa
Ny OnePlus Band dia manampy teboka fanampiny, manana maody fanatanjahantena 13 isika hafa: mandeha an-tongotra isaky ny dingana, mihazakazaka mitohy, miaraka amin'ny bisikileta ary 10 samy hafa. Hifanaraka amin'ny filan'ilay olona izy io ary mety amin'ny gym raha hanao fanazaran-tena isan-karazany ianao.
OnePlus dia nampiditra an'i Band ny fahafaha-mahazo karazana fampandrenesana rehetra avy amin'ny terminal anao mankany amin'ny fehin-tànana, ny fanairana na ny famerenana mozika. Izy io koa dia manana famantaranandro sy famantaranandro, ka miatrika bracelet isika nefa tsy isalasalana fa feno tanteraka amin'ny vidiny mahatratra ny tsenan'i India.
Anisan'ireo fanampin'izany dia tsy misy safidy hafa tsy mitovy amin'ny finday, ny Zen Mode tafiditra ary ny safidy hahalala ny fotoana amin'io fotoana io. OnePlus Band Mampanantena ny ho tarika iray manontolo izy hitondrana eo am-pelatananao ary mety amin'ny karazana toe-javatra rehetra.
SCREEN AMOLED 1.1 santimetatra miaraka amina vahaolana 126 x 294 teboka
BATERA 100 mAh / Tombanana ho 14 andro eo ho eo
MIARITRA ISIKA Fanoherana ny rano IP68 / 5 ATM
Sela Mpandray Hafanana SpO2 / Heart Sensor / Accelerometer / Gyroscope
mifanentana Ao amin'ny Android version 6.0 na avo kokoa
Software Manana fomba fanatanjahan-tena 13 / Fanairana / fampandrenesana / Fampisehoana audio / Stopwatch / Timer / Time / Zen Mode / Option hahitana telefaona
DIMENSION SY lanjan'ny: 40.4 x 17.6 x 11.95 / 22 grama
Ny OnePlus Band dia natomboka tamin'ity fotoana ity tany India, izay efa misy hividianana sahabo ho INR2,799, eo amin'ny 31 euro eo ho eo ny fanovana, na dia hisy aza ny tolotra fandefasana amin'ny INR2,499 (27 euro). Misy safidy hividianana tadiny hafa amin'ny INR399 (4,50 euro), misy amin'ny loko mainty, volondavenona ary manga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny OnePlus Band dia nambara tamin'ny sensor SpO2 sy ny fahaleovan-tena hatramin'ny 2 herinandro
Nanazava ny tale jeneralin'ny Telegram: raha mila fiainana manokana sy fahalalahana ianao dia mandehana avy any Apple ary miloka amin'ny Android
Ahoana ny fanidiana fampiharana amin'ny teny miafina amin'ny EMUI